यस कारण कांग्रेस सडकतर्फ मोडियो - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
यस कारण कांग्रेस सडकतर्फ मोडियो
काठमाडौं, पुस २२ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि तत्काल राजनीतिक व्याख्या गरे पनि आन्दोलन वा चुनावी तयारीमा जाने भन्नेमा अलमलमा रहेको कांग्रेस अन्ततः आन्दोलनकै बाटोतिर लागेको छ । पार्टीभित्रको दबाब र वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्छन् भन्नेमा अविश्वास बढेकोले सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई आन्दोलनतर्फ मोडेका छन् ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनका रूपमा कांग्रेसले केन्द्रदेखि वडासम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले २५ पुसमा तीन सय ३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ३ माघमा सात सय ५३ वटै पालिका र ८ माघमा ६ हजार सात सय ४३ वटै वडामा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार चुनाव पनि हुँदैन कि भनेर सभापति देउवा डराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई प्रभावित पारेर संसद् पुनस्र्थापना गर्न दिनुहुन्न र निर्वाचन पनि गर्नुभएन भने त्यसपछि के हुन्छ ? कांग्रेसलाई सन्देह छ,’ सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देशमा संसद् पनि नहुने, निर्वाचन पनि नहुने भयो भने त्यसले देश दुर्घटनामा जान्छ । यसलाई रोक्नका लागि कांग्रेसको अहिलेको संघर्ष हो । सभापतिजीले नै त्यो निर्णय गर्नुभएको छ, अब यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । दोधारमा हुनुपर्ने कारण नै छैन ।’
दोस्रो दिन पनि उही क्रम दोहोरियो । पौडेलले आन्दोलनको माग गरे पनि देउवाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेनन् । ८ पुसको बैठकमा देउवाले कांग्रेसले अहिले तुरुन्तै सडक प्रदर्शन वा आन्दोलन नगरेर अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यही विषयमा नेताहरूबीच चर्काचर्कीसमेत पर्यो ।
नेताहरूको रस्साकस्सीकै बीच प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसकै दिन देशैभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने पत्रकारमाझ सार्वजनिक गरे, तर पछि विज्ञप्ति निकालेर सच्याए । संसद् विघटनका विरुद्ध देउवाले आन्दोलनको घोषणा गर्न अटेरी गरेपछि ९ पुसको बिहान पौडेलले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरे । नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेलसमेत सहभागी बैठकले विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव र दबाब केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने निधो गर्यो ।
तर, वरिष्ठ नेता पौडेल भने आन्दोलन गर्ने विषयमा पार्टीमा सहमति भए पनि कुन स्तरसम्म लैजाने ? भन्ने विषयमा एकमत नरहेका स्पष्ट पारे । ‘सभापतिजीले आन्दोलन गर्नै नचाहनु भएको होइन, अहिलेका आन्दोलन सर्वसहमतिमै घोषणा भएका हुन्, आन्दोलनबारे विवाद छैन, तर यसलाई कुन स्तरमा लैजाने ? नारा कस्तो बनाउने ? भन्ने विषयमा केही फरक मत छन् । संसद पुनस्र्थापनाका विषयमा हामीले बोल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ, उहाँले बोल्नुभएको छैन, तर हामीले बोलेको कुरामा उहाँले त्यति आपत्ति पनि जनाउनुभएको छैन,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सरकारको संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि संसद् पुनस्र्थापनाको पक्ष कि विपक्षमा भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने बताउँछन् । ‘संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यति स्पष्ट पारिसकेपछि कांग्रेसलाई किन शंका गरेको ?’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले खबर लेखेका छन् ।
नेकपाभित्र कारबाहीको शृंखला बढ्दो, युवराजको ‘पुनरागमन’ शंकरलाई तगारो